Halkee la isla marayaa koobkii Qaramada Afrika?
Koobka Qaramada Afrika ayaa maalintii labaad ka socda dalka Masar, iyadoo guulo waaweyn oo muhiim ah la kala gaadhay.
Xulka ka socday dalka Uganda ayaa guul 2-0 uga badiyey xulka DR Congo, labadan gool oo ay kala dhaliyeen labadii qaybood ee ciyaarta, ayaa u suurto galiyey in ay si sahal ku dhaafaan. Patrick Kaddu ayaa goolka hore u dhaliyey Uganda, halka gool labaad markii la isku soo laabtay uu u labeeyey Emmanuel Okwi, sidaasna guushu ku raacday.
Tirada goolasha dartood, waxay Uganda hoggaanka u haysaa Group A, maadaama ay Masar oo hore 1-0 uga badisay Zimbabwe ay wada leeyihiin dhibco siman oo min saddex dhibcood ah.
Dhanka kale xulka qaranka Nigeria ayaa Iyana guul ka gaadhay xulka Burundi oo markii u horreysay koobkan ciyaaray, waxayna kaga badiyeen 1-0. Kulankan oo qaybtiisii hore ismari waa ku dhammaaday, inkastoo labada kooxoodba ay sameeyeen iskudayo loo fishay goolal. Kolkii la isugu soo noqday, qaybtii labaad ee ciyaartaas ayay Nigeria heshay goolka keliya ee u saamaxay iny guul ku furtaan koobkan, waxaana u saxiixay ciyaaryahankooda, Odion Ighalo oo isla qaybtaa danbe ciyaarta soo galay.
Guushan ayaana Nigeria uga dhigan inay saddex dhibcood ku hoggaaminayaan Group B.
Guinea iyo Madagascar ayaa Iyana barbarro ku kala baxay, ciyaarta ayaana ahayd mid adag oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen qaabciyaareed wanaagsan oo is dhammaystiraya. Sory Kaba ayaa guusha u dhiibay xulkiisa Guinea gool uu kaga naxsaday Madagsascar, balse waxay kaga jawaabtay 2 gool lix daqiiqo gudahood, goolal ay kala dhaliyeen Anicet Andrianantenaina iyo Charles Carolus Andriamahitsinoro. Francois Kamano ayaa se barbarrada gool rikoodhe ahaa ugu keenay kooxdiisa, sidaana ciyaartu ku dhammaatay barbarro 2-2 ah.
Group B, oo ay kooxahani ka tirsanaayeen, waxaa hoggaanka u haysa Nigeria, oo iyadu dubatay xulka Burundi.
last updated: 2019-06-27@07:06